विमान दुर्घटना हुँदा कम्तीमा १६ जनाले ज्यान गुमाए - Nepalese Times
माओवादीले तोक्यो ३२ विभागका प्रमुख, कुन विभागको जिम्मेवारी कसलाई ? (सूचीसहित)3मिनेट अघि
खानेपानी कार्यालयका हाकिमलाई सिके राउतका कार्यकर्ताले नाङ्गेझार पारेर यसरी गाउँ घुमाए, कारण यस्तो ! 59 मिनेट अघि
विमान दुर्घटना हुँदा कम्तीमा १६ जनाले ज्यान गुमाए
नेप्लिज संवाददाता २४ आश्विन २०७८, आईतवार १९:२१ (1 हप्ता अघि) २६० जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । रुसमा एउटा सानो विमान दुर्घटनामा परेको छ।
प्रारम्भिक विवरणहरूका अनुसार घटनामा कम्तीमा १६ जनाको ज्यान गएको विभिन्न संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
रुसी सरकारी समाचार संस्था टासका अनुसार मस्कोबाट झन्डै १,००० किलोमिटर पूर्वमा रहेको टेटारस्थानमा भएको उक्त घटना भएको हो।
उक्त विमानमा सवार ६ वा ७ जनाको उद्धार गरिएको र गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याइएको बताइएको छ।
दुर्घटनामा परेको विमान एउटा स्थानीय फ्लाइङ्ग क्लबको रहेको जनाइएको छ। उक्त विमान उडेको केही समयमै दुर्घटनामा परेको बीबीसीले जनाएको छ ।
यसैबीच, पाकिस्तानको ‘परमाणु बमका पिता’ का रूपमा सम्मानित अब्दुल कदीर खानको निधन भएको छ । उनी ८५ बर्षका थिए ।
फोक्सोको समस्याले गर्दा इस्लामाबादको केआरएल अस्पतालमा सारिएपछि उहाँको मृत्यु भएको पाकिस्तानको राज्यद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय प्रसारक पीटिभीले पुष्टि गरेको छ ।
पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले एक ट्वीटमा भनेका छन्,“‘डा. अब्दुल कादिर खानको निधनको खबरले आफू निकै दुःखी भएको बताए । सन् १९८२ देखि नजिकबाट चिनेदेखि नै मैले उहाँप्रति व्यक्तिगत रूपमा तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपतिका हैसियतले उच्च सम्मान गर्दै आएको थिएँ ।”
“उनले हामीलाई राष्ट्रको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत पार्न आणविक प्रणालीको विकास गर्न मदत गरेका थिए । राष्ट्रले उनको सेवा कहिल्यै बिर्सनेछैनन् ।”
खानले परमाणु क्षेत्रमा राष्ट्रलाई आर्क–राइभल भारतसँग मिलाएर आफ्नो सुरक्षालाई ‘अजेय’ बनाएकोमा प्रशंसा गरिएको थियो । इरान, लिबिया र उत्तर कोरियासँग अवैध रूपमा आणविक प्रविधि बाँडेको आरोप लागेका कारण उनको योगदान र उचाइ छायाँमा परेको बताउने गरिएको छ ।
सन् २००६ मा खानलाई प्रोस्टेट क्यान्सर भएको थियो तर शल्यक्रियापछि उनलाई उक्त समस्या निको भएको थियो । पाकिस्तानी अदालतले उनलाई नजरबन्दबाट रिहा गर्न आदेश दिएपछि फेब्रुअरी २००९ मा उहाँले खुला हिँडडुलका लागि अनुमति पाएका थिए ।